Amabali EBhayibhile: UNowa Wakha Umkhombe - IWebhsayithi Esemthethweni YamaNgqina KaYehova
UNOWA wayenomfazi noonyana abathathu. Amagama oonyana bakhe yayinguShem, uHam noYafete. Yaye ngamnye kubo wayenomfazi. Ngoko kwakukho abantu abasibhozo kwintsapho kaNowa.
UThixo wafuna ukuba uNowa enze into engaqhelekanga. Wamxelela ukuba akhe umkhombe. Lo mkhombe wawumkhulu njengenqanawa, kodwa wawufana nebhokisi enkulu ende. UThixo wathi: ‘Wenze ube nemigangatho emithathu ukuphakama, uze wenze amagumbi kuwo.’ Kula magumbi kwakuza kuhlala uNowa nentsapho yakhe, izilwanyana, kwanokutya kwabo bonke.
Kwakhona uThixo wathi kuNowa makawenze umkhombe ukuze ungangeni manzi. UThixo wathi: ‘Ndiza kuhlisa umkhukula wamanzi ukutshabalalisa ihlabathi lonke. Wonke umntu ongekho emkhombeni uya kufa.’
UNowa noonyana bakhe bamthobela uYehova baza baqalisa ukwakha. Kodwa abanye abantu basuka bamhleka. Baqhubeka besenza izinto ezimbi. Akukho mntu wamkholelwayo uNowa xa wabaxelelayo okwakuza kwenziwa nguThixo.
Kwathabatha ixesha elide ukwakha umkhombe ngenxa yokuba wawumkhulu. Ekugqibeleni, emva kweminyaka, wagqitywa. Ngoku uThixo waxelela uNowa ukuba angenise izilwanyana. UThixo wathi makangenise ngambini kwiintlobo ezithile zezilwanyana, imazi nenkunzi. Kodwa kwezinye iintlobo zezilwanyana, uThixo wathi uNowa makangenise zibe sixhenxe. Kwakhona uThixo wathi kuNowa makangenise zonke iintlobo ezahlukeneyo zeentaka. UNowa wakwenza konke oko wayekuthethile uThixo.
Kamva, uNowa nentsapho yakhe nabo bangena emkhombeni. Emva koko uThixo waluvala ucango. Ngaphakathi, uNowa nentsapho yakhe babelindile. Khawuzithelekelele ulapho emkhombeni nabo, ulindile. Ngaba wawuza kubakho ngokwenene umkhukula njengokutsho kukaThixo?
Ayemangaphi amalungu entsapho kaNowa, yaye ayengoobani amagama oonyana bakhe abathathu?
Yintoni le ingaqhelekanga uNowa awacelwa nguThixo ukuba ayenze, yaye kwakutheni?
Basabela njani abamelwane bakaNowa xa wayebaxelela ngomkhombe?
UThixo wathi uNowa makenze ntoni ngezilwanyana?
Kwafuneka benze ntoni uNowa nentsapho yakhe emva kokuba uThixo eluvalile ucango lomkhombe?
Funda iGenesis 6:9-22.
Yintoni eyenza uNowa waba ngumkhonzi obalaseleyo woThixo oyinyaniso? (Gen. 6:9, 22)
UYehova uvakalelwa njani ngogonyamelo, yaye oku kumele kuyichaphazele njani indlela esikhetha ukuzonwabisa ngayo? (Gen. 6:11, 12; INdu. 11:5)
Singamxelisa njani uNowa xa siyalelwa yintlangano kaYehova? (Gen. 6:22; 1 Yoh. 5:3)
Funda iGenesis 7:1-9.
Isibakala sokuba uYehova wamgqala njengelungisa uNowa, indoda engafezekanga, sisikhuthaza njani namhlanje? (Gen. 7:1; IMize. 10:16; Isa. 26:7)